I-China Izacile i-Polyimide egoqekayo i-FPC enabakhiqizi be-FR4 abaqinisa | Kangna
Umzimba omncane we-FPC ogoqekayo nge-FR4 stiffener
Uhlobo lwento: i-polyimide
Min imbobo usayizi: 0.20mm
Iqedile ukujiya kwebhodi: 0.30mm
Umbala wesifiva sesolder: obomvu
Isikhathi sokuhola: izinsuku eziyi-10
I-FPC yisifinyezo sesifunda esiphrintiwe esiguquguqukayo. ukukhanya kwayo, ukujiya okuncane, ukugoba mahhala nokusongwa nezinye izici ezinhle kakhulu.
I-FPC yenziwa yi-United States ngesikhathi senqubo yokuthuthukiswa kobuchwepheshe be-rocket.
I-FPC iqukethe ifilimu le-polymer elincanyana lokuvikela umzimba elinamaphethini wesekhethi ahambisanayo ananyathiselwe kulo futhi ahlinzekwa ngopende oluncane lwe-polymer ukuvikela amasekethe womqhubi. Ubuchwepheshe busetshenziselwe ukuxhuma amadivayisi kagesi kusukela ngawo-1950 ngenye indlela. Manje sebungobunye bobuchwepheshe bokuxhumana obubaluleke kakhulu obusetshenziselwa ukwenziwa kwemikhiqizo eminingi yanamuhla esezingeni eliphezulu kakhulu ye-elekthronikhi.
1. Ingagobeka, ilinywe futhi isongwe ngokukhululeka, ihlelwe ngokuya ngezidingo zokuhlelwa kwendawo, futhi ihanjiswe futhi inwetshwe ngokungenamkhawulo esikhaleni esinokubukeka okuthathu, ukuze kuzuzwe ukuhlanganiswa kwenhlangano yezingxenye nokuxhunywa kocingo;
2. Ukusetshenziswa kwe-FPC kunganciphisa kakhulu ivolumu nesisindo semikhiqizo ye-elekthronikhi, ukuzivumelanisa nokwakhiwa kwemikhiqizo ye-elekthronikhi ibheke ekuxinaneni okukhulu, i-miniaturization, ukuthembeka okuphezulu.
Ibhodi lesifunda le-FPC futhi linezinzuzo zokushabalalisa ukushisa okuhle nokuqina, ukufakwa okulula nezindleko eziphansi eziphelele. Ukuhlanganiswa kokuklanywa kwebhodi okuguquguqukayo futhi okuqinile nakho kwenza ukushoda okuncane kwe-substrate eguquguqukayo kumthamo wokuthwala wezinto ngezinga elithile.
I-FPC izoqhubeka nokusungula kusuka kuzici ezine ngokuzayo, ikakhulukazi ku:
1. Ubukhulu. I-FPC kufanele iguquguquke futhi ibe mncane ngokwengeziwe;
2. Ukusonga ukumelana. Ukugoba kuyisici semvelo se-FPC. Ngokuzayo, i-FPC kumele iguquguquke, izikhathi ezingaphezu kwezingu-10,000. Vele, lokhu kudinga i-substrate engcono.
3. Intengo. Njengamanje, intengo ye-FPC iphakeme kakhulu kunaleyo ye-PCB. Uma intengo ye-FPC yehla, imakethe izoba banzi kakhulu.
4. Izinga lobuchwepheshe. Ukuze uhlangabezane nezidingo ezahlukahlukene, inqubo ye-FPC kufanele ithuthukiswe futhi ukuvula okuncane kanye nobubanzi bomugqa / isikhala somugqa kufanele kuhlangabezane nezidingo eziphakeme.
Langaphambilini 8.0W / mk ukushuba okuphezulu kokushisa kwe-MCPCB kwesibani sikagesi
Olandelayo: 6 ungqimba impedance control rigid-flex board with stiffener